Ku beddel Thunar iyo Xfdesktop Nautilus gudaha Xfce | Laga soo bilaabo Linux
Thunar waa Maamulaha faylka asal ahaan taas Xfce, taas oo ah mid fudud oo fudud, waxaa ka maqan xulashooyinka qaarkood oo leh Nautilus y hoomboro tusaale ahaan.
Maqaalka soo socda ayaa sharaxaya sida loo isticmaalo Nautilus waayo, Maamul desktop-ka iyo galka xitaa markaan isticmaaleyno Xfce waxaana ka soo qaatay a ku dheji fagaarayaasha Ubuntu. Waxaan kaliya isku dayay qaabkan laptop-ka saaxiibkay isticmaala Xubuntu 10.04 laakiin waa inay ahaataa mid ansax u ah wixii kale oo la qaybinayo. U kac iyada !!!
1 Curyaaminta Desktop-ka Xfce
2 Ku rakibidda Nautilus
3 Nautilus oo ah Maamulaha Faylka asalka ah
4 Maareynta warqadda darbiga leh Nitrogen
5 Ka hawlgala fayllada Nautilus.
Curyaaminta Desktop-ka Xfce
Waxa ugu horreeya ee aan sameyn doonno ayaa ah inaan joojino dhammaan waxyaabaha xfdesktop, taasi waa, laga bilaabo miiska Xfce. Tan waxaan u aadaynaa Liiska »Xulashooyinka» Desktop. Marka aan halkaa tagno waxaan raacnaa talaabooyinka soo socda:
<° - Gudaha background (Gundhig) waxaan joojin karnaa gidaarka gidaarka. Iyaga waxaan wax ka beddeleynaa xulashooyinka soo socda:
Midabada: Midab adag oo annagaa dooranayna negro.
<° - Gudaha Ambiyada waxaan joojineynaa dhammaan xulashooyinka halkaas ka muuqda.
<° - Gudaha Astaamaha waxaan gab gabno astaamaha ku jira xulashooyinka Muuqaal.
Ku rakibidda Nautilus
Marka dambe waa inaan rakibno Nautilus. Si loo isku dayo in loo rakibo xaddiga ugu yar ee ku-tiirsanaanta suuragalka ah ee Ubuntu / Debian waxaan fureynaa terminal oo waxaan dhignaa:
Goor dambe ayaanu bilownay Nautilus con [Alt] + [F2] qorista sida macquul ah: Nautilus iyada oo aan xigashooyinka.
Nautilus oo ah Maamulaha Faylka asalka ah
Hadda in la sameeyo maxaa Nautilus fadlan bilow soo socda na arag ku soo biir fadhigeena oo bedel Thunar y xfdesktop waa inaan tagnaa Liiska »Xulashooyinka» Fadhiga iyo Bilowga oo waxaan tagnaa tabta Kalfadhi. Halkaas waa inaan ka tagnaa oo kaliya waxaan u baahanahay inaan bilowno markaan soo galno Xfce.
Caadi ahaan howlaha socda waa in loo daayaa:
Haddii ay jiraan wax kale oo furan waan xirnaa ka dibna waxaan ku keydinaa badhanka: Fadhiga Badbaadi.
Tani waxay ku filnaan doontaa waqtiga soo socda ee aan bilaabi doonno, Nautilus maareeyaa desktop-keena oo noqo kii furo fayllada. Hadda, waxaa jira dhowr waxyaalood oo dheeri ah oo la sameeyo, mid ku yimaadda casharka asalka ah iyo mid kale oo aan mar dambe ku daray.
Maareynta warqadda darbiga leh Nitrogen
Haddii aan isku dayno inaan bedelno gidaarka gidaarka iyadoo la adeegsanayo ikhtiyaarka Beddel Asalka Taariikhda leh Xaqa Guji waxba ma dhici doonaan. Tani waa sababta oo ah ikhtiyaarkaasi wuu u yeerayaa guryaha-muuqaalka-muuqaalka-muuqaalka kaas oo ku jira xirmada gnome-control-center.
Waan rakibi karnaa xirmadan, laakiin taasi waxay u baahan tahay dhowr ku tiirsanaan Gnome in aynaan u baahan doonin, markaa waan ka faa'iideysan doonnaa nitrogen barnaamij aad u fudud oo loogu talagalay Maaree sawirada en Gnome. Markaa waan rakibnaa oo waxaan ku shaqeynaa amarkan:
Marka codsiga la bilaabo waxaan kaliya u baahan doonnaa in aan ku hagaajino galka ay ku yaalliin sawirada aan dooneyno.
Caadi ahaan waxaan isticmaali karnaa:
/ usr / share / xfce4 / gadaal
/ usr / share / asalka
Samee nitrogen waa wax aad u fudud, sidaa darteed uma maleynayo inaan u baahanahay inaan sharaxo sida loogu daro ama looga saaro fayl sawirro leh. Maxay nitrogen la bilaabi doonaa markaan isku dayno inaan bedelno gidaarka, waa inaan abuurnaa asal ahaan fayl gudaha ku jira / usr / bin oo leh magaca: guryaha-muuqaalka-muuqaalka-muuqaalka taas oo ku habboon tan:
[code] dir = »ltr»> function –show-page = asalka
Kadibna waxaan siinnaa rukhsad dil:
Oo diyaar. Mar kasta oo aan gujinno Beddel Asalka Taariikhda way soo bixi doontaa nitrogen ????
Ka hawlgala fayllada Nautilus.
Hadda gudaha Xubuntu soo socda menu waxaan leenahay plugin Goobaha kaas oo fuliya Thunar halkii Nautilus. Markiiba ma aanan fahmi karin sida tan loo beddelo, markaa waxa igu soo dhacay waxay ahayd inaan dhigo Fayl shaqsiyeed gudaha Miiska.
Si aan si fudud ugu hawlgalino faylku waa inaan rakibno tafatiraha gconf.
Kadibna leh [Alt] + [F2] waxaan ku fulinaa adigoo garaacaya «tafatiraha gconf»Iyadoo aan lahayn calaamadaha oraahda. Markaa waan yeeli doonnaa barnaamijyada »nautilus» desktop oo waxaannu dhaqaajineynaa galka shakhsiga ah.
Diyaar, waxaan xirnaa kalfadhiga, dib ayaan ugu laabaneynaa iyo Voilá !!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Ku beddel Thunar iyo Xfdesktop Nautilus gudaha Xfce
Hanuun wanaagsan oo loogu talagalay dadka aan ku faraxsanayn Thunar ee Xfce ,,,, laakiin waxa aan ahay, waxba ugama beddelo Thunar. Waa waxa aan u baahanahay 🙂
Ku jawaab eltbo
Waxaan kale oo jecelahay Thunar, waa wax laga xumaado in aysan laheyn tab ama loo qeybin karo TT
Haa! waa wax laga xumaado in aanan lahayn baarkooda. Ma qof baa saxaya taas?
Ku jawaab donmatas
waxa aan ka jeclahay nautilus waa raadinta isku dhafan, taas oo aan qorraxdu haysan
Miyaanay taasi kuu shaqeynaynin? : https://blog.desdelinux.net/creando-un-buscador-de-ficheros-para-thunar-con-zenity/
Waad ku mahadsan tahay Elav sii wadida inaad ku hodmiso dhamaanteen kuwa jecel jecel desktop-ka Xfce aqoontaada. Waxaan u maleynayaa inay la mid tahay eltbo, oo kor ku yiri: Waxba ugama beddelo Thunar. Waxaan ogaadey inay sifiican uga shaqeyso Nautilus (aniga ahaan) waxayna ii ogolaaneysaa inaan ku furo faylal qaab konsole ah. Kaliya waxaan ku dari lahaa qeybta loo kala qeybiyay F3 sida Nautilus ay sameyso, taasi waa waxa kaliya ee aan weydiisan lahaa Thunar inuu sameeyo.
Anigu waxaan ahay taageere mawliidka sidoo kale, waxaanan u adeegsadaa xfce 4.6.2, maxaa yeelay distoorkeygu weli 4.8 ma haysto. Waxaan kaliya jeclaan lahaa laba arrimood: bishaas waxay i siisaa macluumaadka ku saabsan booska ay 4 ama 5 faylal ah oo ay doorteen jiirka ay ku jiraan (waxay kaliya igu tuuraysaa waxa ku jira galka oo dhan), iyo inay jiraan fursado badan oo rukhsadda rukhsadda ah (sida "u furo galkan asal ahaan" sida uu leeyahay pcmanfm. Hagaag, haddii qof ogyahay, ii sheeg.
Laakiin Thunar waxaad ku dari kartaa ficillo qaas ah oo wax walba lagu sameeyo.
Waa inaad tagtaa tifaftirka / ficilada Custom / Add, oo halkaas ku buuxi waxyaabaha soo socda:
Magaca: Fure u fur asal ahaan
Faahfaahin: Fure galka Thunar oo leh xuquuq mudnaan
Amarka: gksu thunar% d
Icon si fudud
Tabta xaaladaha muuqaalka:
- Qaabka feylka: *
- Waxay muuqataa haddii xulashada ay ka kooban tahay: Kaliya dooro Tusaha.
Ma garanayo haddii qayb la isugu geyn karo fagaaraha ama meel lagu daabici karo goobahan, maaddaama aan haysto dhowr tallaabo oo caadooyin ah oo aan ka soo uruurinayey meelo kala duwan, si aan u cabbiro sawirrada, u arko cabbirka diskiga dhowr feylood oo la xushay, iwm .
Tani waxay umuuqataa mid aad u xiiso badan !!! Waan tijaabinayaa. Ma aanan dooneynin inaan Nautilus u isticmaalo bedelka Thunar sababtoo ah waxqabadka liita, laakiin waxaa laga yaabaa inaan rakibo waxyaabaha ku tiirsan ee dheeriga ah. Waxaan isku dayi doonaa Nitrogen si aan u arko sida ay wax u socdaan.
Way ii shaqeyn weyday 🙁
Waxaan ula jeedaa, waxay shaqeysay kalabar. Waan heli kari waayey Nitrogen si aan ugu muujiyo qoraalka. Ma aqaano haddii ay ku jiri doonto wax qalad ah.
Waxyaabo kale ayaa ah in Thunar uu wali yahay maareeyaha faylka asalka ah. Waan ku beddelay qayb ka mid ah barnaamijyada la doorbido laakiin xitaa uma adeegsado sidaas oo kale.
Maya, si loo beddelo isbeddelada 🙁
Fedora 16, sameynta Nautilus oo ah Maamulaha Faylka asalka ah waa mid aad u fudud:
Codsiyada Liiska> Dejinta> Codsiyada la door biday> qaybta Utiliyada waxaan ku dhajinay nautilus Maareeyaha Faylka.
Iyada oo tan uma baahnid inaad joojiso asalka miiska ama wax uun.
Laakiin dhibaatooyinka aan helo oo runtii la xallin lahaa haddii aan ogaan lahaa waxa ku tiirsan ee la rakibo, waa:
* Arag sawirada yar yar ee PDF-yada iyo sawirada, laakiin ma ahan fiidiyowyada.
* Diirad kama saarin in aan habeeyo Samba, laakiin Thunar wadaagista tusaha waa macquul.
Debian-ka waxaa ku jira xirmo loo yaqaan 'tumbler' oo ka taxadaraya soo saarista aragtiyada, ma aqaano inay u shaqeyso sidoo kale faylasha:
Kiiskeyga maadaama aan kaliya ubaahanahay tab marka aan la shaqeynayo labo ama in ka badan oo tusayaal isla waqti isku mid ah, ama mararka qaar waxaan u baahanahay inaan ka helo xiriiriyeyaal feylal ah oo ku jira daaqada, iwm.
Waxaan ku abuuray ikhtiyaar ikhtiyaar ah Thunar, taas oo ah in la furo tusaha Nautilus, adoo adeegsanaya amarka nautilus –no-desktop% d
Waxyaabaha aan-desktop-ka ahayn si aysan u furin habab ay Nautilus u maamusho si toos ah desktop-ka Gnome. Haddii ay fikraddu ku habboon tahay qof.
Haye sidee tahay, waan iskudayey wax walbana waan qabtay waxkastana waa la qabtay laakiin waxay dhibaato i siineysaa qoraalka aad u isticmaasho gidaarka, dhibka waa kuwa soo socda:
[isticmaaleyaasha Soodejiyeyaasha Marti-geliyaha ah] $ ./gnome-appearance-properties
./gnome-muuqashada-properties: sadarka 1: gt: amar lama helin
./gnome-appearance-properties: line 6 :: amarka lama helin
Sida muuqata ma haysto feylka ama gt-ka "gt" ee sameeya khadka 6 isna qalad buu i siiyaa, ma ogtahay waxa ay noqon karto ????
Jidka aan u isticmaalo ArchLinux
Ku jawaab Zernad
Waa maxay sababta aanan mar dambe daaqad ugu jiidan karin dhinaca midig oo aan u beddeli karo aagga shaqada? Waa wax Xfce nooc ah, malahayga.
Waa wax la mid ah qaabkiisa shaqada, aniga ayey igu dhacdaa aniga sidoo kale
Cusboonaysii casharrada (yaasha), maxaa yeelay marka la eego u janjeeridda nasiib darrada ah (qaar ka mid ah) horumariyeyaasha inay si tartiib tartiib ah uga saaraan waxqabadka barnaamijyada ugu caansan ee GNU, suurtagal ma aha in la raaco tilmaamaha tan iyo markii la tirtiray xulashooyinka menu ee u dhigma.
Waxaan sidoo kale u maleynayaa in "casharradaada" guud ahaan ay tahay in yar oo ka sii faahfaahsan, lagana fogaado "güindosera" u janjeera inaad siiso cuntada caadiga ah adigoon sharraxaad ka bixin wax, ugu yaraan waxoogaa yar ama dhexdhexaad ah oo qoto dheer. Laakiin haye, sida «Basque» u socdo, waxaa laga yaabaa in guusha bartaada internetka ay ku saleysantahay si sax ah ...
Baakadaha RPM Qeybta 4: Baako Ma aha Tetris 2